निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधी कति शक्तिशाली ? – Pahilo Page
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधी कति शक्तिशाली ?
२६ भाद्र २०७५, मंगलवार १४:३७ 605 पटक हेरिएको
काठमाडौं, २६ भदौ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा संलग्न अपराधी निकै शक्तिशाली र पहुँचवाला रहेको स्पष्ट भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिकै सदस्य वीरेन्द्रबहादुर केसीले निरीह जस्तै बनेर “निर्मला पन्तको वास्तविक हत्यारालाई कारवाही गर्न असमर्थ रहेको र सजायको सिफारिस गर्न नसक्ने” भन्दै समितिबाट राजीनामा दिनुले यो तथ्यलाई उजागर गर्छ ।
गत साउनको १० गते साथीको घरमा गएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा भोलिपल्ट शव भेटिएको थियो । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै कञ्चनपुरमा लामो समयसम्म ठूलो आन्दोलन चल्यो । निर्मला हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्यो । यो घटनाले आन्दोलन अझै उग्र बन्यो । स्थानीयवासीको आशङ्का थियो, यो घटनामा विष्टबाहेकका व्यक्तिको हात छ । आन्दोलन दबाउन प्रहरीले गोली नै चलायो । गोलीबाट १ जनाको ज्यान गयो र कैयौं घाइते भए । त्यसपछि सरकारले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई नै फिर्ता बोलायो र सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो । करीव आधा महिनासम्म अत्यन्त मिहिन तरिकाले अनुसन्धानमा खटिएका छानबिन समितिका सदस्य केसीको राजीनामा र त्यसमा उल्लेख गरिएका कुराहरुले के भन्छन् ? उनको राजीनामापछि निर्मला हत्याकाण्ड थप रहस्यमयी बनेको छ तर यसले एउटा कुरा स्पष्ट बोलेको छ कि अपराधी चानचुने छैन । छानविन समितिकै सदस्यलाई यति निरीह जस्तो बनाउने अपराधी निकै शक्तिशाली हो भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
छानविन समितिका सदस्य तथा उपसचिव केसी र अन्य सदस्यहरुलाई समेत मार्ने धम्की दिइएको खुलासा भएको छ । उच्चस्तरीय छानविन समितिकै सदस्यले पत्रकार सम्मेलन गरेर जीवनरक्षाका लागि सार्वजनिक अपिल गर्नुले घटनाको गाम्भीर्यतालाई अझ स्पष्ट पारेको छ । जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई सहजै प्रभावमा राख्नसक्ने हैसियतकै अपराधी भएकाले नै शुरुमा अनुसन्धान गलत दिशातर्फ सोझ्याइएको यो घटनाले पनि स्पष्ट पार्छ । सरकारकै उच्चस्तरीय छानविन समितिका सदस्यले जीवनरक्षाको हारगुहार गर्नुपर्ने स्थितिले अपराधीको “शक्ति”को सहज आँकलन गर्न सकिन्छ । केसीले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न खोज्दा मार्ने धम्की आएको बताउनु सारै उदेकलाग्दो अवस्था हो ।
सदस्य केसीले छानविन समितिको म्याद थपिएकोमा आपत्तिसमेत जनाएका छन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने छानविन समितिले केसीकै शव्दमा “शक्तिशाली अपराधी”को पहिचान गरिसकेको छ । उनको भनाईको आशय यो पनि छ कि छानविन समितिको म्याद थपेर अनुसन्धानको निष्कर्षलाई अल्मलाउन खोजिएको छ । उनले निर्मला र उनको परिवारलाई न्याय दिलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएको पनि बताएका छन् । यसले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई छर्लङ्ग पार्छ । पक्कै पनि यसले लोकतन्त्र, कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ र दण्डहीनताको कहालीलाग्दो तस्वीर उजागर गरेको छ । निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा पहिचान गरी तत्काल सार्वजनिक गरियोस् र कानुनको कठघरामा उभ्याई दण्डित गरियोस् ।